Namono Mpianatry Ny Oniversite Nizeriana 50 Ireo Mpikatroka Boko Haram · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2013 12:02 GMT
Nitifitra ireo mpianatra tao amin'ny Kolejin'ny Fambolena ao amin'ny firenena Yobe ny vondrona mpampihorohoro Nizeriana Boko Haram, mpianatra am-polony 18 hatramin'ny 22 taona natory tao amin'ny efitrano fatorian'ny mpianatra kilasimandry no notifirin'izy ireo.
Araka ny filazan'ny Associated Press, mpianatra maherin'ny 50 no namoy ny ainy, ary nodoran'ireo mpikatroka ihany koa ny efi-trano fianarana nandritra ny fanafihana.
Fikambanana mpikatroka jihadista mpampihorohoro miorina any avaratra atsinanan'i Nizeria, aravatr'i Kamerona ary Nizera ny Boko Haram. Nazoto nanao fanafihana tao Nizeria izy io hatramin'ny 2001. Toy izao manaraka izao ny isan'ny maty tamin'ny fanafihana vitan'ny Boko Hara (tsy ireo ihany) tao amin'ny firenena:
24 Desambra 2003: Fanafihana tao Kannama sy Geidam ao amin'ny firenena Yobe ny andro mialoha krismasy
21 Septambra 2004: Fanafihana tao amin'ny tobin'ny polisy Panshekara, Kano
21 Septambra 2004: Fanafihana tao amin'ny tobin'ny polisy Bama sy Gwarzo
31 Desambra 2007: Fanafihana tao amin'ny Lapan'ny Filoha ( Port/Harcourt )
26 Jolay 2009: Fanaovana fitroarana goavambe narahana fanafihana tao amin'ny tobin'ny polisy ao Bauchi ary niely hatrany amin'ny firenena Kano, Yobe sy Borno
7 Septambra 2010: Fanafihana ny fonjan'i Bauchi nahatafatsoaka gadra marobe, anisan'izany ireo mpikambana ao amin'ny BH.
6 Oktobra 2010: Famonoana ny lehiben'ny ANPP, Awena Ngala tao Maiduguri
24 Desambra 2010: Namono olona 38 ny daroka baomba nandritra ny Krismasy tao Jos
9 Oktobra 2010: Famonoana ilay mpitondra fivavahana Miozolomana Bashir Kashara sy iray tamin'ireo mpianany tao Maiduguri
31 Desambra 2011: Famonoana tao Mogadishu ny kandidàn'i ANPP Modu Fannami Gubio sy 8 hafa tao Maiduguri
6 Jiona 2011: Famonoana mpitondra fivavahana Miozolomana, Ibrahim Birkutu tao Maiduguri
16 Jiona 2011: Daroka baomba tao amin'ny Foiben'ny Polisy ao Abuja
26 Aogositra 2011: Daroka baomba tao amin'ny tranoben'ny Firenena Mikambana ao Abuja
22 Septambra 2011: Fanafihana tao amin'ny fonjan'i Maiduguri ka gadra an-jatony tafatsoaka
20 Desambra 2011: Am-polony ireo namoy ny ainy tamin'ny fitifirana tao Maiduguri
25 Desambra 2011: Daroka baomba nisesisesy tamin'ny andron'ny Krismasy tao amin'ny fanjakana Nizera sy ny fanjakana Lembalemba ka nahafatesana olona am-polony
22 Janoary 2012: Baomba nipoaka marobe sy fanafihana tao amin'ny toby polisy sy ny biraon'ny mpiambina ao Kano: 215 ireo namoy ny ainy
9 Aprily 2012: Fanapoahana baomba ny Alahadin'ny Paska tao Kaduna. 38 ireo namoy ny ainy.
Tamin'ny volana Mey 2013, nanambara ny firenena latsaka an-katerena tao amin'ny firenen'i Borno, Yobe ary Adamawa ny Filoha Goodluck Jonathan izay firenena tena voakasiky ny fanafihana fampihorohoroana. Nampanantena ny filoha Nizeriana fa:
…na inona na inona, na aiza na aiza mety halehany, hohazaintsika izy ireo, hojonointsika izy ireo, ary hoentintsika eny amin'ny fitsarana. Tsy maninona izay vokany, handresy ity tolona amin'ny fampihorohoroana ity isika.
Na dia izany aza, nampisaona ny tontolon'ny bilaogy Nizeriana ilay famonoana mahatsiravina natao tamin'ireo ankizy tsy manan-tsiny tao anatin'ny torimasony ity.
Nalahelo i Obi Asika, filohan'ny SocialMediaWeek Lagos :
Nahoana isika no mamono ny tenantsika ary mbola tsy mahaaisotra hatrany ity hadalana ity ary ireo izay manararaotra amin'izany? Rera-tsaina amam-panahy tanteraka aho nahare momba an'i Yobe tamin'ny maraina # rip
Kivy dia kivy i Mark Amaza, mpaneho hevitra:
Sarotra dia sarotra tahaka izany ny fiainana ao Nizeria. Voa in-droa (toy ny tain'omby natsentsina lavabary) ireo izay ao Yobe, Borno, ao atsimon'i Kaduna sy faritra ao amin'i Lembalemba ary Nassarawa.
Mpanao gazety Abang Mercy nampahatsiahy vono olona goavana tahaka izany nataon'ny Boko Haram tamin'ny volana Jolay 2013:
Toy ny tao Yobe nisianà lehilahy mitam-piadiana tamin'ny Sekoli-mpanjakana ambaratonga faharoa fototra tao an-tanànan'i Mamudo izay namoizana mpianatra 29 sy mpampianatra iray tamin'ny volana Jolay.
Nnodim Blossom, mpanoratra sady bilaogera ary namana, nanao vavaka ho an'ireo namoy ny ainy:
Mahatsiaro ireo fianakavian'ny maty izay misaona ao Yobe. Handry am-piadanana anie ny fanahin'ireo namoy ny ainy. Amena!
Henry Okelue nanontany hoe:
Ahoana ny fomba hampiharana ny firenena latsaka an-katerena, amin'ireo fanjakana 3, anisan'izany i Yobe ary mbola tsy mijanona ny fanisana ireo namoy ny ainy?
Nanontany i Opeolu Abiodun :
— Opeolu Abiodun (@Upmajor) September>29, 2013
Mirary fiononana ireo tsy manan-tsiny namoy ny ainy androany noho ny fanafihana nataon'ny Boko Haram tao amin'ny fanjakan'i Yobe. Mandra-pahoviana no hiaretantsika izao.
Nindrana ny tenin'ilay mpanoratra Nizeriana, Chiagozie Nwonwu nanoratra hoe:
Mbola nirefotra indray ny tafondron'ny Boko Haram. Ankehitriny, ho maro ireo renim-pianakaviana higogogogo ny zanany tsy hody an-trano ….